Sida loo masaxo akoon Microsoft ah 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ka dib markii aad isticmaaleyso muuqaalka 'Outlook', 'OneDrive', iyo xogta Windows ee isku xirnaanta dhowr sano, waxaad go'aansatay inaad sameysato koonto cusub oo Microsoft ah oo aad tirtirto tii hore. Waxaad horeyba ugu guuleysatay howlgalka koowaad, walina aadan ku guuleysan inaad fahanto sida loo tirtiro koontada Microsoft. Hagaag, haddii ay taasi tahay, ha ka welwelin: dhab ahaantii, waxaan kuu sharxi karaa, tallaabo tallaabo, wax kasta oo loo baahan yahay in la sameeyo si loo dhammaystiro "feat".
Tirtirista koontada Microsoft ayaa ah hawl aad u fudud runtii in la sameeyo waxayna qaadataa daqiiqado yar oo waqti firaaqo ah in la dhammaystiro. Waxa kaliya: xusuusnow, koontadaada, waxaad sidoo kale waayi doontaa marin u helida feylasha OneDrive, sanduuqa aragtida aragtida, isku dubaridka xogta Windows iyo dhammaan adeegyada ku xiran kan dambe (tusaale ahaan, Xbox Live, Microsoft 365 ee Codsiyada xafiiska, iwm. Gudaha).
Haddii wax walboo adiga kuu cad yihiin oo aad wali ku talo jirto inaad sii wado, dib u fadhiiso oo xoogga saar aqrinta macluumaadka aan ku siinayo. Waxaan hubaa in aakhirka aad diyaar u noqon doonto inaad ila ogolaato in dhammaystirka tirtirka akoonka Microsoft uu ahaa mid aan waxba ka jirin. Mamnuuca hadalka oo aan bilowno!
Sideen uga saaraa Microsoft
Sida looga saaro akoonka Microsoft qalab
Sida looga saaro koontada Microsoft Windows
Sida looga saaro akoonka Microsoft macOS
Sida looga saaro akoonka Microsoft Android
Sida looga saaro koontada Microsoft iOS / iPadOS
Sida loo tirtiro koontada Microsoft Teams
Hadaad xiiseyneyso inaad ogaato Sideen u tirtiraa koontadayda Microsoft?, sii wad akhriska: wax walba hoos ayaa lagu sharaxay. Marka hore, si kastaba ha noqotee, waxaan kugu dhex mari doonaa tallaabooyin horudhac ah oo aad qaadi karto si looga fogaado dhibaatooyinka ama kormeerka xun.
Ugu horreyntii, waxaan rabaa inaan isla markiiba caddeeyo hal qodob. Sidaan horeyba ugu soo sheegnay bilowgii casharka, koontada Microsoft wax kale ma ahan ee waa isku darka cinwaanka emaylka iyo lambarka sirta ah ee loo adeegsado helitaanka adeegyada sida Outlook.com, OneDrive, Microsoft 365 ka Xbox Live.
Koontada Microsoft waxay la mid tahay cinwaanka emaylka Hotmail ka PanoramaSidaas darteed haddii aad sameysay akoon Hotmail hore oo aad hadda rabto inaad tirtirto, sii wadista ayaa tirtiri doonta koontadaada Microsoft sidoo kale. Dabcan?
Waxyaabo kale oo muhiim ah in la ogaado waa in xisaabaadka Microsoft ay la xiriiri karaan diiwaangelinno badan, sida kuwa Xafiiska (Microsoft 365) waa Xbox Live (waa. Ciyaar baas), markaa kahor intaadan tirtirin astaantaada waa inaad xaqiijisaa inaysan kujirin adeegyo rukumasho firfircoon. Adeegyada firfircoon, tirtirka akoonnada Microsoft waxay halis ugu jiraan in lagaa qaado wax aadan isticmaalin.
Si aad u xaqiijiso in aysan jirin adeegyo firfircoon oo ku jira koontadaada, guji halkan si aad ugu xirto guddiga maareynta rukumanka oo aad u hubiso inaysan jirin wax rukun ah oo la tilmaamay. Haddii, liddi ku ah, ay jiraan rukumo, tirtir dhammaantood adigoo riixaya xulashada u dhiganta.
Waxaan kaloo kuu soo jeedinayaa inaad ahmiyad gaar ah siiso joogitaanka midkoodna dheelitirka Microsoft ama kaararka hadiyadda ee Xbox, kaas oo ku firfircoon koontadaada. Haddii aad leedahay dheelitirka kaarka hadiyadda, waa inaad ka faa'iideysataa kahor intaadan tirtirin koontadaada Microsoft. Haddii kale, dheelitirka lagu helo kaararka hadiyadaha ayaa khasab ku lumaya marka koontada la xiro.
Sidoo kale, haddii aad sidoo kale u isticmaashay koontadaada illaa hadda inaad dirto oo aad u hesho emayllo iyada oo loo marayo Outlook.com, fadlan ogow ka hor intaadan tirtirin, inay waxtar leedahay. nuqul ka soo dejiso fariimahaaga iyo xiriiradaada ku xiran tahay Haddii aadan aqoon sida loo sameeyo, akhri tilmaamahayga ku saabsan sida loo dhoofiyo emayllada ka soo baxa Muuqaalka iyo sida loo dhoofiyo buugga cinwaanka ee Muuqaalka kaas oo aan kugu siiyay dhammaan tillaabooyinka aad raacayso si aad u faahfaahsan.
Ugu dambeyntiina, ogow haddii aad damacsan tahay inaad tirtirto koontada Microsoft maxaa yeelay mar dambe ma jeceshahay magaca aad dooratay (taasi waa, qaybta soo socota ka hor @) sidoo kale waad la qabsan kartaa hadaad wax abuureyso alias, taasi waa, cinwaanada emaylka labaad ee tixraaca cinwaanka koowaad.
Si loo abuuro magac, waxaad si fudud u aadaa qaybta Macluumaadka ee koontadaada Microsoft oo dooro sheyga Maaree sida aad ugu soo gasho Microsoft. Marka xigta, xaqiiji aqoonsigaaga adoo galaya lambarkaaga sirta ah ama lambarka amniga ee laga helo SMS / app, ama, haddii aadan horey u sameyn, tilmaam habka aad rabto inaad adeegsato si aad u sii ilaaliso koontada.
Adigoo riixaya codka Kudar Email lifaaq qaybta Alias ​​dell'account oo buuxi foomka lagu soo bandhigay shaashadda adoo ku qoraya cinwaanka emaylka aad rabto inaad u isticmaasho magac ahaan.
Marka aad dhamayso tallaabooyinka kor ku xusan, si tirtir akoonka Microsoft, qalliinka ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad ku xirnaato guddiga maamulka isla. Si tan loo sameeyo, guji halkan, ka dibna ku gal adeegga koontada aad rabto inaad xirto oo aad gujiso Magacaaga, oo la dhigo bidixda kore.
Bogga cusub ee furmay, dhagsii xiriirka Sida loo xiro koontadaada dhinaca hoose ee bogga (bidix) iyo, ka dib markaad akhrido macluumaadka ku saabsan nidaamka su'aasha ku taal, dhagsii badhanka Hore u soco (Dhamaadka bogga).
Mar dambe, bogga cusub ee la furay, waa inaad calaamadee calaamadee sanduuqyada aad shaashadda ka aragto oo dhan iyo, kadib marka la muujiyo sababta loo xirayo astaanta meeniska Xulo sabab, dhagsii badhanka buluugga ah Ku calaamadee koontada xiritaanka.
Waqtigan xaadirka ah waxaad u sheegi kartaa naftaada wax ka badan qanacsanaanta: waxaad ugu dambeyntii ku guuleysatay inaad dhammaystirto nidaamka oo dhan si aad u awoodo inaad tirtirto koontada Microsoft. Hambalyo!
Markaad shaki gasho, ogow inaad dib u raadsan karto tallaabooyinkaaga iyo dib u hawlgeli koontadaada 60 maalmood gudahood kadib marka howsha la sameeyo Dhawaan sameeyay. Inta lagu jiro waqtigaas, koontada waxaa loo calaamadeeyay xiritaanka, laakiin dhab ahaantii wali way jirtaa.
Si aad dib ugu furto koontada Microsoft ee la tirtiray, waxaad u baahan doontaa inaad awood u yeelato inaad caddeyso inaad isticmaaleyso macluumaadka amniga ee koontadaada. Si tan loo sameeyo, si fudud ugu xir xisaabtaada Microsoft ee ku taal Outlook.com ama degel websaydh kasta oo kale ah, ku gal aqoonsiga koontada aad calaamadeysay xiritaanka, oo guji badhanka Dib u fur xisaabtaada.
Waxaad markaa u baahan doontaa inaad xaqiijiso aqoonsigaaga adigoo aqbalaya rasiidka lambarka amniga emayl ahaan ama SMS ahaan / abtirsiin ahaan iyo si aad u dhamayso waa inaad riixdo badhanka Fiican. Runta fudud?
Xaaladda nasiib darrada ah ee aad ka fikirtay laakiin waqtiga ugu badan ee dib loo hawlgaliyo iyo dib u soo kabashada koontadaada Microsoft horay ayey u dhacday, waan ka xumahay inaan kuu sheego, laakiin marxaladdaan hadda lagu jiro xaaladdu mar dambe suurtagal maaha in wax la sameeyo.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad aragto wax ku habboon, waxaad abuuri kartaa koonto cusub oo Microsoft ah adigoo raacaya tilmaamaha aan kugu siiyay ee ku saabsan hagitaankeyga ku saabsan sida loo abuuro xisaab Microsoft ah.
Ayn hadda aragno sida looga saaro akoonka Microsoft qalab. Marka xigta, waxaan kuu sharxi doonaa sida tan looga sameeyo Windows, laakiin sidoo kale macOS, Android iyo iOS / iPadOS (haddii aan ku dari lahaa koontada meerahan si aan u waafajiyo xiriirada iyo xisaabaadka emaylka).
Aynu marka hore aragno sida looga saaro akoonka Microsoft Windows. Marka hore, fur Guddi xakameyn Windows (waxaad ka raadin kartaa ka Baadhitaanka Cortana oo ku yaal barta shaqada Windows 10 ama adigoo gujinaya sheyga u dhigma Bilow, dhammaan noocyada nidaamka hawlgalka Microsoft).
Kadib guji ereyga Koontada isticmaale iyo, daaqadda cusub ee furmay, guji shayga markale Koontada isticmaale. Kadib xulo shayada Maamul koonto kale> Ka saar koontada Taasina waa. Haddii ay dhacdo inaad rabto inaad hayso faylasha koontada su'aasha ku jirta, xusuusnow inaad doorato ikhtiyaarka Hayso faylasha.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida xisaab looga tirtiro kombuyutarkaaga (maahan kaliya xisaabta Microsoft), waxaan kugula talinayaa inaad akhriso hagaha aan gabi ahaanba u hibeeyay mowduucan.
Hadaad kudartay a Koontada Microsoft Alabama Mac Si aad ugu adeegsato Boosta, Jadwalka, ama barnaamijyo kale, waad ka saari kartaa adiga oo gala goobaha macOS.
Sidaa darteed, qorsheyso inaad furato Nidaamka doorbidida, adigoo gujinaya badhanka cawlan leh garsooraha oo ku yaal barta Dock ama Launchpad, oo marin u hel qaybta Koontada internetka.
Kadib xuloKoontada Microsoft in aad tirtirto adiga oo gujinaya magaca (dhinaca bidix ee bidix) iyo, ka dib markuu hubiyo sanduuqyada Boostada, Xiriirrada, Calendar mi Notaguji badhanka (-) oo guji badhanka OK.
Markaad tirtirto koontada, macluumaadka adiga kugu saabsan waa lagaa saari doonaa codsiyada aad horey u dooratay.
by ka saar akoon Microsoft ah Android, waxaad u baahan tahay inaad tagto goobaha nidaamka oo aad si toos ah uga sii socoto halkaas.
Sidaa darteed, sii wad inaad furto arjiga. goobaha, adigoo riixaya sumadda giraangiraha xaadir shaashadda guriga ama khaanadda oo ku dheji ereyga Koontada.
Haddaba, guji ikhtiyaarka Microsoft (o Panorama ka Xafiiska, sida ay khuseyso), iyo haddii aad leedahay wax ka badan hal xisaab Microsoft ah oo la xiriirta qalabkaaga, xulo midka aad rabto inaad ka saarto. Markaas taabo ikhtiyaarka Tirtir ka Tirtir oo xaqiiji hawlgalka adoo riixaya badhanka Tirtir koontada ka Tirtirka Koontada. Ciyaartu way dhammaatay!
Si aad uga saarto koonto Microsoft taada iPhone ka iPad, waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah helitaanka dejinta iOS / iPadOS, hel qaybta loogu talagalay xisaabaadka ku xiran qalabkaaga oo tirtir midka adiga ku xiisaynaya.
Si aad u sii waddo, fur barnaamijka goobaha IOS / iPadOS, adigoo ku riixaya astaanta cawl leh garsooraha ku soo bandhig shaashadda guriga, ku cadaadi waxyaabaha Boostada ka Xiriirrada iyo, shaashadda cusub ee furmay, taabo ereyga Koontada iyo codka Panorama.
Kadib riix batoonka Tirtirka Koontada oo xaqiiji hawlgalka adoo taabanaya sheyga Tirtir IPhone ka Ka tirtir ipadka, si looga saaro dhammaan macluumaadka la xiriira koontada si looga saaro qalabkaaga. Kadib sug daqiiqado yar iyo koontada Microsoft ayaa laga saari doonaa qalabkaaga Apple.
Waxaad u timid tusahan inaad ogaato sida loo tirtiro koontada Microsoft Teams? Hagaag, haddii aad koontadan kula samaysay Microsoft oo aad kan horeba tirtirtay adigoo raacaya tilmaamaha lagu bixiyay cutubyadii hore, uma baahnid inaad wax kale qabato, maxaa yeelay markaad tirtirto koontada Microsoft waxaad tirtiri doontaa koontada Kooxaha . natiijo ahaan.
Haddii kale, haddii aad ku sameysay koontadaada Kooxo rukunka Microsoft 365, waxaad u baahan doontaa inaad kansasho rukunkaas si aad sidaas u sameyso. Haddii aad rabto macluumaad dheeri ah oo ku saabsan, waxaan kuu gudbinayaa inaad aqriso hagaha oo aan si faahfaahsan ugu sharxayo sida loo tirtiro xisaabaadka Kooxaha Microsoft.
Sida loo arko falanqeynteyda Amazon